तेरिया जस्तै भाइरल भएका को हुन् अशोक दर्जी ! भिडियो आफै बोल्छ !!
२०७५ वैशाख ३१ गते २१:२८
राम कुमार श्रेष्ठ, नेपाली सांगितिक क्षेत्रको नयाँ रामकृष्ण ढकालको रुपमा पनि लिइने गरिएको अशोक दर्जीले हालै आफ्नो पहिलो ‘मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिना को मन‘ बोलको गीत रेकर्डिङ गराएका छन् नेपाली ड्रेसमा नेपालका एक टप गायक तथा सङ्गीतकार टंक बुढाथोकीसँग र यस्लाई...
ऋषि धमलाले भने- राजेश हमाललाई छोडेर मानिसहरु मसँग सेल्फी खिच्न आउछन्…(भिडियोसहित)
२०७५ वैशाख ३१ गते १:४३
कान्तिपुर टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘इट्स माई शो’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमला र अभिनेत्री रेखा थापालाई अतिथीका रुपमा निम्ताइएको थियो। शोमा कार्यक्रम प्रस्तोता सुरजसिंह ठकुरीले दुवै अतिथीसँग रमाईला अनि आ-आफ्ना पेशासँग सम्बन्धित र निजी जीवनका कुराकानी समेत गरे। कार्यक्रममा ऋषि धमलाले पछिल्लो दिनमा आफूसँग धेरै...
२०७५ वैशाख २८ गते २३:४५
काठमाडौँ, २८ वैशाख । लेखक इन्दिरा दीक्षितको दोस्रो कृति नियात्रा संग्रह ‘विचरित पाइलाहरु’ सार्वजनिक भएको छ । समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान, बेलायत, सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सो कृतिको वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितले विमोचन गर्नुभएको हो । सो अवसरमा साहित्यकार दीक्षितले इन्दिराको...
« अघिल्ला 1 … 20 21 22